डिस्टिङ्सन नआए पनि 'रोज' फस्ट... :: सेतोपाटी संवाददाता :: Setopati
पछिल्लो समय नेपाली सिनेमाका युवा दर्शकमाझ लोकप्रियता कमाइरहेका प्रदीप खड्का आफ्नो वाकपटुदाको लागि पनि उत्तिकै चिनिन्छन्। उनी आफ्ना हरेक कुरालाई सटिक ढंगले राख्ने गर्छन्। शुक्रबारबाट उनी अभिनित 'रोज' सिनेमा रिलिज भएको छ। सिनेमा सुरूवातदेखि नै विभिन्न कारणले विवादमा तानिदैं आएको छ, जुन रिलिजको दिनसम्म पनि जारी रह्‍यो। सिनेमा घरी विषयका कारण त कहिले हल बाँडफाँडका कारण विवादित बनिरह्‍यो। 'रोजी' नाममा निर्माण घोषणा भएर रिलिजका समयमा 'रोज' बन्न पुगेको सिनेमाका मुख्य अभिनेता हुन् प्रदिप।
उनै प्रदिप सिनेमा रिलिजको पूर्वसन्ध्यामा सेतोपाटीका लागि अशेष अधिकारीसँगको अन्तर्वार्तामा यस्तो सुनिए:
'रोज' सिनेमा गर्न किन तयार?
कथाले गर्दा। त्यस्तो खालको कथा कुनै पनि अभिनेताले हत्तपत्त नपाइएला भनेर।
तपाईंका निर्देशकका अघिल्ला दुई सिनेमा ‘फ्लप’ थिए भन्ने कुरामा सचेत हुनुहुन्थ्यो?
(हाँस्दै) यस्तो थियो। सिनेमा टिमवर्क हो, त्यो सिनेमामा चाँहि टिमले राम्रो काम गर्‍यो भने सिनेमा राम्रो निस्किन्छ भन्ने लागेर गर्न तयार भएको हूँ।
टिमवर्क त हो, तर सारा टिमको काम क्याप्टेन (निर्देशक) माथि भरपर्छ, होइन र?
सुरूमा भेट्दा मैले मान्छे कत्तिको काममा गम्भीर छ त्यो हेर्छु। कहिले काँही निर्णय गलत हुन्छ, मान्छु तर उहाँसँग भेट्दा उहाँले मेरा दुई सिनेमाले राम्रो गरेका छैनन्। तिमीले 'यो कन्सेप्ट' मन पराएका छौ। तिमीसँग काम गर्न पाउँदा राम्रो हुनेछ। यो मेरा लागि 'गर या मर'को सिनेमा हो भन्ने किसिमको कुरा आएपछि त्यस्तोमा 'ठीक वा बेठीक' भन्दा पनि त्यो 'चेन' मा म बस्दा कडा हुन्छ भने किन नबस्ने भनेर हो। फेरि कथा नै मन नपरेको भए कुरा अर्को हुन्थ्यो।
भनेपछि यस पटक निर्देशकमाथि प्रदिप नभएर प्रदिपमाथि निर्देशक भरपरेको अवस्था हो?
त्यस्तो भन्न मिल्दैन।
मिल्ने भए चाँहि?
अन्तिम कुरा त निर्देशककै हुन्छ नि। उहाँको बोलीमा विश्वास भएरै त म तयार भएँ। उहाँले बोल्दा यो पटक मैले जाने जतिको क्षमता लाउँछु भनेर बोल्नुभयो, मैले त्यसैलाई विश्वास गरेँ।
कथा मन परेर गरेँ भन्नुहुन्छ, ट्रेलर टिजरबाट तपाईँको भूमिका गएका सिनेमा भन्दा भिन्न देखिन्छ। के तपाईँ आफ्नो रिल छवि बदल्दै हो?
मैले 'लबर व्वाई' भूमिका गर्दै आएको छु। यसमा पनि हुन त म तयस्तै भूमिकामा छु। तर, यसमा आफ्नो प्रेमिकाको हत्या गर्न अवस्थामा पुगेको एक प्रेमीको भूमिकामा छु, त्यसैले यो केही फरक भने अवश्य हुनेछ। हो यसमा म पहिला जस्तो रूने, प्रेमिकाको लागि फाइट खेल्न जाने, आमाबाबुको लागि ज्यान फाल्ने किसिमको यसमा पाउनु हुन्न।
यस्तो पात्रमा छिर्न कस्तो तयारी गर्नुपर्‍यो?
मैले सुरूमा त आफ्नो पात्रको 'गेटअप' को तयारी गरेंँ। त्यो समाजको आँखाबाट त्यसलाई हेर्दा त्यही किसिमको देखिन्छ कि देखिदैन, मैले सुरूमा त्यसैलाई हेरेँ। बाँकी कुरा सिन अनुसार विकास गरेँ। बिभिन्न सिनेमाबाट त्यस किसिमका पात्रहरूलाई बुझ्ने प्रयास गरेँ।
स्क्रिप्ट अनुसार त्यो पात्रको बानी आफूबाट प्रवाहित गराएँ। मैले कथा अनुसार त्यो पात्रको जीवनमा आउने परिवर्तनसँगै विकसित हुने मनोविज्ञानलाई पनि अध्ययन गरेँको थिएँ।
'गर या मर' को अवस्थामा रहेका निर्देशकको कामबाट कतिको खुशी हुनुहुन्छ?
(हाँस्दै) नेपालको परिप्रेक्ष्यमा निर्देशकले निर्देशकको रूपमा, अभिनेताले अभिनेतामात्र बनेर काम गर्न पाउने, निर्माता निर्माता मात्र बन्ने अवस्था छैन। नेपाली सिनेमा 'कम्प्रोमाइज' मै बन्छ। त्यसैले मेरो सोच ठूलो भयंकर गर्ने भन्दा पनि उपलब्ध श्रोत-साधनबाट उत्कृष्ट निकाल्नुपर्छ भन्नेमा हुन्छ। यसमा पनि त्यही भएको छ।
भनेपछि निर्देशकले सिनेमा प्रस्ताव गर्दा र सिनेमा तयार भइसक्दा सिनेमा सय प्रतिशतमा कति छ?
लगभग, डिस्टिङ्सन। त्यति नआए पनि 'रोज' फस्ट डिभिजनमा छ।
अनि अर्को एक सिनेमासँग भिडाउन तपाईंको पनि हात छ भन्ने सुनियो, खास कुरा के हो?
सिधै भन्नुपर्दा जुधेकोभन्दा पनि सँगै आएको हो।
एउटा सामान्य बुझाइ ठीक होला। एउटा टिभीमा एउटा एङ्करले गर्ने भनेको उत्कृष्ट उद्घघोषण हो, त्यो कार्यक्रमलाई कतिबेला कुन किसिमले प्रसारण गर्ने भन्ने निर्णय कार्यक्रमका निर्माता-निर्देशकमाथि भरपर्छ। उसले गएर मेरो कार्यक्रम ८ बजेको समाचारको सट्टा हाल भनेर मिल्छ? म एंकरमात्रै हुँ।
सत्य कुरा के हो भने सिनेमा पहिला फागुनमा सुट गर्ने कुरा थियो। सिनेमा सो समयमा सुरू भएन। स्क्रिप्ट पनि मन परेको थिएन, राम्रो बनाऊ अनि बैशाख/जेठमा गरौं भन्ने मेरो प्रस्ताव थियो। त्यो बेला तीजमा रिलिज गर्न कुरा थियो र नेपाली सिनेमाको नियम अनुसार शुक्रबार नै रिलिज गर्नुपर्ने अवस्था छ, तीजमा आउन सम्भव भएन त्यसैले अगाडि लाउँदा यस्तो संयोग पर्‍यो।
त्यसमाथि चाडपर्व व्यापारका हिसाबले राम्रो हो। अब यसमा निर्माताको लगानीको कुरा हुन्छ। यस्तोमा तिजको पछाडि भन्दा तिजको अगाडि आएको फाइदा हुन्छ।
यसबाट दुई सिनेमालाई फाइदा के?
एक अर्को प्रमोशनमा एकअर्काको सिनेमाको नाम जोडिएको छ। दुबै अवस्थामा नाम दुबैको आएको छ। प्रचारको हरसम्भव तरिकामा कुनै एउटै सिनेमा मात्र आएको छैन्। यसबाट एक्लै आउँदा प्रचारका लागि थप रकम लाग्थ्यो भने यसमा कम छ।
सँगै आउँदा मैले घाटा पनि देखेको छैन, किनकी हामी दुई फरक-फरक वितरण सञ्जालबाट आइरहेका छौं। मल्टिप्लेक्समा पनि दुबै सिनेमाले पचासौं शो पाउने अवस्था पनि थिएन, त्यसैले कसैलाई घाटा छैन्।
सिनेमाको जनरा पनि फरक छ, दर्शकले आफ्नो रूची अनुसार सिनेमा हेर्नुहुन्छ। इन्डियन रेष्टुरेन्टमात्र चल्ने भए मान्छेले चाइनिज खोल्ने काम गर्दैन थिए होलान्। उहाँलाई चाहनेले उहाँको सिनेमा हेर्नुहुन्छ, मलाई चाहनेले मेरो।
'राम कहानी' को ट्रेलर हेर्नुभयो?
हेरेँ नि। त्यस्तो किसिमको सिनेमा गर्न पनि रमाइलो हुन्छ। कमेडी, हरर मैले नगरेको सिनेमा हो। त्यो सँगै 'रोज' पनि मैले नगरेको सिनेमा हो। म यसैबाट बढी आशावादी छु।
सिनेमा चलेन भने?
म सिनेमा चलेन भन्ने कुराबाट त्यति डराउँदिन्, किनकी मेरो सुरूवात नै सुपर फ्लप सिनेमाबाट भएको हो।
चल्दा म जति जिम्मेवारी लिन्छु, नचल्दा पनि उत्ति नै लिन्छु। मलाई दर्शकमाथि पूरा विश्वाश छ। मैले कति र कस्तो अभिनय गरेंँ भन्नेबाट सही मूल्याङ्कन भएमा खुशीनै हुन्छु।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, भदौ २२, २०७५, ०८:३४:००